Izikrini Zokwamukelwa Kwedijithali - Isoftware Elula Yesibonisi Sezimpawu Zedijithali
Izikrini zedijithali zokwamukelwa kwehhovisi, izikhungo zomcimbi, izihambi
CELA Amakhasimende WAKHO
Yehla ngonyawo lwesokudla ...
Noma ngabe uyawabona amaklayenti akho ehhovisi lakho, noma ubamba imicimbi emikhulu nezinkulungwane zabantu, i-Easy Multi Display ikusiza ukwamukela izivakashi zakho kalula. Noma ngabe ufuna ukubonisa ukubingelela okujwayelekile, noma ukwamukelwa okwenzelwe wena kwezivakashi zakho ezikhethekile, ungakwenza nakho izikrini zokwamukela ezidijithali ku-EMD.
Xhumana nathi namuhla ukudingida izidingo zakho bese uqala ukudala ukwamukelwa okufudumele kakhulu embonini yakho ngesoftware ebiza kakhulu futhi elula kakhulu yemultimedia emakethe.
DALULA UMFAZI OTHENGA ISIMI
Izivakashi zithanda ukuqashelwa. Bazise ukuthi bayaziswa kusukela lapho bangena emnyango bamukelwa ngedijithali.
IZIVIZO ZIYAKWAZI EKUFUNYENKELENI KULUNGILE
Wake waya esikhungweni semibukiso noma ehholo lenkomfa futhi ungaqinisekanga uma usendaweni efanele? Isibonisi esidijithali siqinisekisa izivakashi zakho ukuthi zikutholile.
XHUMANISA IZENZAKALO NEMISEBENZI
Ngemuva kokwamukela izivakashi zakho, ungabelana ngemininingwane ebalulekile ngebhizinisi lakho noma umcimbi, onjengamashejuli, izinkomba kanye namanye amasevisi anikezwayo.
Izimpawu ezinamandla ekusebenzeni kwethu komzimba ziyazisa futhi ziyaqinisekisa iziguli zethu. Lokhu kwenza sikwazi ukubeka ubuso ngemuva kwamagama! Sibonisa nezeluleko ezisebenzayo zeziguli zethu. Lokhu kuyasiza futhi kwenza ukulinda kuzizwe kufushane.
Isazi sokuzivocavoca umzimba, i-Wavre
I-EMD inentengo evikela wonke umncintiswano! Intengo yehlukile futhi inenzuzo enkulu futhi azikho izimali ezifihliwe. Iqembu le-EMD liyaphendula kakhulu futhi linaka zonke izidingo zami.
Umphathi Wezakhiwo Nezindawo, uLouvain-la-Neuve
E-UNICEF, sisebenzisa i-Easy Multi Display endaweni yethu yokuhlala, ukukhombisa ngezenzo zethu ukusiza izingane emhlabeni jikelele. Leli yithuba lethu lokukhombisa ukuzibophezela kwethu ngendlela enamandla - ngomzwelo.
I-Basic Local Network Access 2X PC (idinga amalayisense ama-2: I-PC Server kanye ne-PC Player)
Ukufinyelela Okuthuthukile Kwenethiwekhi
Xhumana nathi ngentengo.
Amakhasimende ethu athanda ukuthi kulula kangakanani ukukhombisa imidiya yawo nge-Easy Multi Display. Isixhumi esibonakalayo sesoftware sikuqondisa kwinqubo yokumisa inqubo ngesinyathelo ngesinyathelo, ukukubuza yonke imibuzo efanelekile lapho usendleleni. Awudingi ukuba yi-tech guru ukuze uvuke usebenzise i-Easy Multi Display.
Isilazi se-Easy Multi Display sikuqondisa ngenqubo yokusetha.
Gcina izilungiselelo eziningi zokubonisa bese uzilayisha kalula.
Ngabe udinga usizo olungeziwe? Bheka Uhlelo Lwethu Lentengo olujwayelekile oluza ngokuqeqeshwa kwesoftware ngehora elilodwa nokusekelwa.
BONAKALA IZIBONELELO ZETHU